Waa Sidee Xaaladda Dhaawaca Mohamed Salah? Miyuu Kasoo Kabsan Ka Hor Kulanka Manchester United? - Gool24.Net
Waa Sidee Xaaladda Dhaawaca Mohamed Salah? Miyuu Kasoo Kabsan Ka Hor Kulanka Manchester United?
Liverpool ayaa rajeyneysa in Mohamed Salah uusan saameyn ku keenin dhaawacii kasoo gaaray ciyaartii ay 2-1 kaga adkaadeen Leicester City, labada kooxood ayaa isaga hor yimid Anfield Road kulan ka tirsana ciyaaraha 8-aad ee horyaalka Premier League.
Hamza Choudhury ayaa dhibaato u geystay xiddiga reer Masar xilli uu isku dayay inuu weerar rogaal celis ah ku dhibaateeyo kooxda martida aheyd, waxaana laga saaray ciyaarta daqiiqadahii ugu dambeeyay kadib markii uu awoodi waayay inuu sii ciyaaro.
Jurgen Klopp ayaa si xun uga carooday ficilka uu sameeyay xiddiga khadka dhexe Foxes, wuxuuna aaminsan yahay iney aheyd in kaarka cas loo taago maadaama uu dhibaato bareer ah u geystay xiddig kasoo horjeeda.
Si kastaba Mirror Football ayaa fahamsan in Liverpool ay hadda qabto rajo badan oo ku aadan in xiddigaan uu soo bogsoodo ka hor kulanka ay Old Trafford kula ciyaarayaan Man United, waana kadib ciyaaraha caalamiga ah ee la aadi doono todobaadkaan dhamaadkiisa.
Liverpool rikoor 100% ah ayey ku bilaabatay horyaalka fasalkaan kadib markii ay 24-dhibcood shaqeysteen iyagoo kaliya ciyaaray 8-kulan, waana markii labaad oo ay taariikhda sidaas sameeyaan.
Liverpool kadib guushoodii sabtidii waxey u aheyd mid weyn maadaama shalay guuldaradii labaad ee fasalkaan ay qaateen kooxda kula tartameysa horyaalka ee Manchester City, kooxda Pep Guardiola waxey 2-0 guuldaro ah ka qaateen Wolves.
Natiijadaas waxey keentay in Liverpool ay 8-dhibcood oo nadiif ah ku qabato horyaalka Premier League.
Si kastaba Mohamed Salah waxaa loo badinayaa inuu soo bogsoon doono kulanka 20-ka October ka dhici doona Old Trafford, wuxuuna ka mid yahay kulamada 9-aad ee horyaalka Premier League.